FAQs - Ningbo Plastic Metal Products Co., Ltd.
Ndingawana riini mutengo?
Isu tinowanzo tora mukati maawa makumi maviri nemana mushure mekunge tawana kubvunza kwako.Kana zviri zvekukurumidzira, ndapota tifonere kana kutiudza mune yako email kuitira kuti isu titore kubvunza kwako sekutanga.
Inguva yakadii yekutungamira kweforoma?
Zvinoenderana nekukura kwe mold uye kuoma kunzwisisa.Kazhinji, nguva yekufambisa ndeye 25-35 mazuva.Kana zviumbwa zviri nyore uye zvisiri muhukuru hukuru, tinogona kushanda mukati memazuva gumi nemashanu.
Ini handina 3D kudhirowa, ndoitanga sei chirongwa chitsva?
Iwe unogona kutipa muenzaniso, isu tichabatsira kupedzisa iyo 3D yekudhirowa dhizaini.
Usati watumirwa, ungave sei nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemhando?
Isu tiri nyanzvi mune zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.Tine QC yekuongorora zvigadzirwa zvisati zvatumirwa.Iwe unogona kuuya kuzoshanyira fekitori yedu kana kubvunza wechitatu bato kuti aongororwe.Kana kuti tinogona kukutumira mavhidhiyo kuratidza maitiro ekugadzira.
Paypal, Western Union, T/T, L/C zvinogamuchirwa, saka ingotizivisa kuti ndezvipi zvakakunakira.
Ndingawana zvideredzwa here?
Ehe, kune hombe kurongeka, mutengi wekare uye vatengi vanogara, tinopa zvine musoro zvidzikiso.
Ndeipi nzira yekutumira inowanikwa?
Negungwa kusvika pachiteshi chepedyo chako.
Nendege kusvika panhandare yendege iri pedyo newe.
Nekutaura (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) kumusuwo wako.